Zimbaboe: Tombony azon’ny tsenambola, fivoriana ara-pivavahana natao am-pilaminana, ary tetika fanararaotra ara-toekarena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Oktobra 2018 8:58 GMT
Satria miha mahantra lalandava ny mahantra, hiha-manana fotsiny kosa ireo manan-karena ao Zimbaboe. Ao anatin’ ity lahatsoratra ity, mamaritra ny fomba nitomboan'ny tsenambolan'i Zimbaboe ho 12 000 % raha oharina amin'ny tamin'ny taona lasa i Mugabe Makaipa satria lasa tafiditra ho anisan'ireo toerana vitsy azo antoka tsy dia fahita firy ary azo iarovana ny vahoaka tsy hiharan'ny fitongonganan'ny sandambola izy. Miaraka amin'ny fiakaran'ny fitontongan'ny sandambola tonga dia nanaka-danitra, mahatratra hatramin'ny 80% ny tahan'ny tsy fananana asa, sady lasa fahasoavana tsy nampoizina ho an'ireo tetika kapitalistan'ireo vitsy an'isa vonona ny hanao izay hampidirana angano ny fampiasàna vola ao Zimbaboe ihany koa. Indrisy anefa, ireo sangany ara-toekarena irery ihany no mahazo tombony amin'ny toe-karena mandravarava ao Zimbaboe. Tena tsy dia fahita firy ao Zimbaboe izy ireo.
Noho izany, mametraka ny volany any amin'ny petra-bola avokoa ireo mpanan-karena, manam-pahefana ao amin'ny governemanta ary ireo banky rehetra mba tsy hahavery ny vidiny. Avo ny tinady, noho izany torak'izany ihany koa ny vidiny.
Kanefa, tsy mahita ny tombontsoa amin'ity na dia iray aza ireo olon-tsotra ao Zimbaboe. Mety tsy ho afaka ny hahita izany intsony ihany koa ny mpibaiko azy ireo atsy ho atsy. Mazava ho azy fa mibontsina ary tsy afaka tazonina ny fitontongan'ny sandambola. Fotoana fohy fotsiny no andrasana mialohan'ny firodanan'izany, hisarika marobe tsy manan-tsiny any amin'ny tangolingolikany.
Mbola mikasika ireo olona iangarana ao Zimbaboe ihany, ifandiran’ i Zimpundit ny mikasika ny fahafantarana raha toa ka tokony hotohanan'ireo Zimbaboeiàna ny antso avy amin'ny zanaka ampielezana momba ny fandroahana ireo zanaky ny mpiasam-panjakana miaina fiainan'ny mpanankarena any amin'ny toerana natao honenan'ny mpianatrny oniversita any andrefana. Tsy mila lazaina fa ny ankamaroan'ireo zaza ireo, raha tsy izy rehetra mihitsy aza, dia mahazo tombontsoa mivantana na tsy mivantana amin'ny toe-javatra mivaivay atrehin'ireo mandoa hetra ao Zimbaboe. Tsy manampy amin'izany tranga izany ihany koa ny zava-misy hoe nanokatra ho an'ny daholobe ny kabariny tsara lahatra manohitra ny tandrefana ny governemanta Zimbaboeana. Te hahalala i Zimpundit:
Izany ve no tokony ho zavatra hiasantsika Zimbaboeana? Sa misy zavatra hafa tokony hampiasantsika ny herintsika?
Herinandro vitsivitsy taorian'ilay faran'ny herinandro feno rà nandriaka teo amin'ny tantaran'i Zimbaboe, namindra ny fifantohany tany amin'i Bulawayo, ilay tanàna faharoa ao Zimbaboe ny fiarahamientana Save Zimbaboe tamin'ity faran'ny herinandro ity. Save Zimbabwe, ilay sampan'asa aman-draharaha izay miandraikitra ireo fikambanan'ny olom-pirenena ao Zimbaboedia tsy inon fa ilay vondrona nikarakara ny fivoriana fivavahana tao Highfield izay noravàn'ny polisin'ny Repoblikan'i Zimbaboe tamin'ny fomba feno herisetra. Nanaraka ny fivoaran-javatra nanodidina ilay fivoriana fivavahana ny This is Zimbabwe. Mbola miahiahy foana, maneho hevitra noho izany momba ny sarintsarim-pahanginana manodidina ilay fihaonana ara-pivavahana tao Bulawayo i The Bearded Man.
Tsy hijanona mihitsy ny fahagagana !
Tena hafa be mihitsy ny maheno hoe nahazo alalana ny fisian'ny fivoriana ara-pivavahana ary tsy nivarina tany amin'ny herisetra, daroka, fisamborana sy famerenana ilay andiana famoretana hitantsika tamin'ny volana farany teo.
Tsy midika izany fa efa niala tamin'ny daroka sns ny antoko eo amin'ny fitondràna, fa noho ny antony sasany, mba nahita ny rariny izy ireo ary mba hitohy ela anie izany
Farany, mitantara ny fitrandrahan'ireo mpanararaotra ilay tontolon'ny fitontonganan'ny sandambola mba hanombànana ireo olona ahiana hanam-bola i Dennis Nyandoro ao amin'ny Kubatana Blogs.
Nankany an-tsena niaraka tamin'ny vadiko aho omaly, ary rehefa nitsidika magazay maro sy nampitaha ireo vidin'entana izahay, nahita ny zandriko lahy sy ny vadiny izay nanao izany koa. Mihevitra ny ankamaroan'ny olona fa kambana izahay saingy tsia, ny maha samihafa anay fotsiny dia izaho manao solomaso fa ny zandriko tsy manao.
Na izany na tsy izany, nandehandeha manerana ireo magazay izahay efatra, nitazona ny harona sase, niresaka tamin'ireo mpivarotra mampiseho ny entany: voatabia, tongolo, ovy, sns.
Nividy ronono manta Chimombe iray fonosana tamin'ny vidiny 5.000$Z tamin'ny mpivarotra izay nanana taminà fonosana tao ambanin'ilay latabatra keliny ny zandriko lahy – ilay mora hoentina rehefa henjehin'ny polisy. Niarahaba ahy tamin'ny feo avo ilay mpivarotra raha toa ka nanantona azy aho: “Aah murungu auya” izay midika hoe olona manam-bola. Izay noho ireo solomasoko fotsiny ihany.
Avy eo aho nanontany hoe ohatrinona ny fonosana Chimombe iray, ary inona hoy ianao? ”6.000$Z fotsiny!” hoy izy nitsiky. Fa nialohan'ny nanomezako ny vola, nanontany azy haingana ny zandriko lahy hoe nahoana no ataony lafo kokoa noho ny namarotany azy ilay entana izy. Nijery ilay zandriko lahy ilay mpivarotra niaraka tamin'ny fijery feno hasiahana, niezaka ny hanakana azy hiteny amiko ny tena vidiny.